Argaggixisada ka timaada badda ayaa weerartay 'Guriga Xeebta' ee Shudder.
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Argaggixisada ka timaada badda ayaa weerartay 'Guriga Xeebta' ee Shudder.
Shudder ayaa bixinaysay Macaamiisha ayaa ka kooban waxyaabo badan oo waaweyn intii lagu jiray aafada iyo toddobaadkan waa mid aan ka reebanayn. Qulqulka cabsida ayaa lagu wadaa inuu sii daayo Aqalka Xeebta on July 9.
Guryahan gurguurta ah, waxaan ku arkeynaa Emily iyo Randall oo safar ugu tagaya hantida badweynta qoyskiisa:
Safarkooda xilli-ciyaareedka ka dib waxaa carqaladeeyay Mitch iyo Jane Turner, oo ah lamaane waayeel ah oo is yaqaanay Randall aabihii kala tagay. Xidhiidh lama filaan ah ayaa samaysma iyadoo lammaanayaashu sii daayaan oo ay ku raaxaystaan ​​go'doominta, laakiin dhammaantood waxay u socdaan weji cabsi leh iyada oo dhacdooyinka deegaanka ee sii kordhaysa ee layaableh ay bilaabayaan inay isbiirsadaan fiidnimadooda nabadeed. Maaddaama ay saameynaha cudurku muuqdaan, Emily waxay la halgameysaa inay macno u yeelato is-qaadsiinta intaan la daahin.
Gawaarida, oo hoos ku socota, waxay leedahay dareenka labadaba Wax The iyo Duulaankii ee Snatchers Body ah.
Agaasime Jeffrey A. Brown wuxuu leeyahay asal u kuur gal goobta wuxuuna adeegsaday xirfadaas si uu niyada ugu dejiyo Aqalka Xeebta. Intaa waxaa dheer, wuxuu rabay inuu sameeyo filim u dabaaldegaya adeegsiga Cronenburg ee argagaxa jirka, oo uu weheliyo John Carpenter, "iyo nihilism cosmic ah ee sheekooyinka HP Lovecraft."
Brown wuxuu ku yiri warbixin ku saabsan filimka:
“The Beach House waa isku day in wada hadal toos ah oo daacad ah lala yeesho dhagaystayaasha. Waxaan doonayay inaan qaato wixii aan dareemay ee ka maqnaa filimada naxdinta leh isla markaana aan ku durro qoraalka iyo qorshaha wax soo saarka. Welwelka aan ka qabo bilowga wax-ka-beddelka bey'adda ayaa siisay gaariga argagaxa, halka xiisaha sayniska isbeddelka uu noqday shidaalka microbial ee sheekada. ”
Aqalka Xeebta yimaado on Shudder July 9.
Muusigga Filimka caanka ah Ennio Morricone wuxuu ku dhintey da'da 91
DAAWO: Filimka Gaaban ee Tyler Christensen 'Dayactir' waa Creepy Fun